Fahazoan-dàlana amin'ny fambolena New Jersey - Ahoana ny fomba fangatahana lisansa 1
Fahazoan-dàlana amin'ny fambolena New Jersey
Taorian'ny fanandramana tsy nahomby nandritra ny taona maro, tamin'ny volana lasa teo dia nisy volavolan-dalàna telo nosoniavina ho lalàna, mamela sy mifehy ny fampiasana marijuana fialam-boly any New Jersey, ary lasa iray amin'ireo fanjakana 14 hametraka ara-dalàna ny fampiasana rongony rongony ho an'ny olon-dehibe 21 taona no ho miakatra.
Amin'izao fotoana izao dia tsy azo atao ny mividy rongony fialam-boly na aiza na aiza any New Jersey, na izany aza, nilaza ny manam-pahaizana fa afaka enim-bolana farafahakeliny alohan'ny fivarotana rongony ara-dalàna voalohany any New Jersey.
Ka izao no fotoana mety indrindra hanombohana ny fiomanana amin'ilay ezaka. Diniho fa ny fisoratana anarana fahazoan-dàlana dia mety ho sarotra sy manjavozavo, izany no antony tokony hanaovanao hatrany Mifandraisa amina matihanina hanampy anao amin'ny fangatahanao.
Inona no atao hoe New Jersey Cultivation Licence
Ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpamboly kilasy 1 dia taratasy ara-dalàna mamela ny tompony hamboly, hamboly, na hamokatra rongony any amin'ny fanjakan'ny New Jersey, ary koa hivarotra sy hitondra izany rongony izany amin'ireo mpamboly rongony hafa, na rongony azo ampiasaina amin'ny mpamokatra rongony, mpivarotra rongony. na mpivarotra rongony fa tsy ho an'ny mpanjifa.
Ny fahazoan-dàlana mamboly rongony dia havoakan'ny Kaomisiona mifehy ny rongony (CRC) ho an'ny toerana anabeazana na fambolena rongony.
Ahoana ny fomba fangatahana lisansa New Jersey Cultivation
Raha te-hangataka fahazoan-dàlana amin'ny fambolena kilasy 1, ny mpangataka dia tsy maintsy:
Mangataka fahazoan-dàlana amin'ny fomba voalaza ao amin'ny lalàna farany sy ny CRC;
Manana olona iray tena voarohirohy izay nipetraka teto amin'ity fanjakana ity nandritra ny roa taona farafahakeliny tamin'ny andro nanaovana ny fangatahana, ary manome porofo fa ity olona ity sy izay olona hafa manana zana-bola izay manana fahefana handray fanapahan-kevitra ho an'ny mpamboly rongony voatanisa amin'ny fangatahana atolotra eo ambanin'ny lalàna dia 21 taona no ho miakatra;
Mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fitsipika na fitsipika apetraky ny CRC;
Omeo ny tsirairay amin'ireto olona manaraka ireto mba hanao fizahana ny tantaram-piainany: ny tompona rehetra, ankoatry ny tompona izay manana zana-bola latsaka ny dimy isan-jato amin'ny mpamboly rongony na mpikambana ao amin'ny vondrona mitazona latsaky ny 20 ny zana-bolan'ny isan-jaton'ny mpamboly rongony ary tsy misy mpikambana ao amin'io vondrona io manana zana-bola mihoatra ny dimy isan-jato amin'ny fampiasam-bolan'ny vondrona, ary tsy manana fahefana handray fanapahan-kevitra mifehy ny asan'ny mpamboly rongony; izay tale rehetra; misy manamboninahitra; ary ny mpiasa rehetra.
Ny fangatahana voalohany momba ny fahazoan-dàlana dia hombana araky ny masonkarena hovolavolain'ny CRC. Hisy teboka bonus ho an'ireo mpangataka monina ao New Jersey. Ny mason-tsivana hovolavolain'ny CRC dia misy famakafakana ny drafitry ny mpangataka, tsy anisany ny fepetra fiarovana sy fiarovana. Ny drafitra fiasan'ny mpangataka dia tokony hampiditra famaritana momba ny fahaizan'ny mpangataka amin'ny, traikefa ary fahalalana ny tsirairay amin'ireto lohahevitra manaraka ireto:
Fambolena na fambolena mahazatra, mahazatra ny fomba fambolena tsara, ary ny mari-pahaizana na diplaoma mifandraika amin'izany;
Fanaraha-maso kalitao sy fiantohana kalitao;
Tadidio ny drafitra;
Fonosana sy fametahana marika;
Fanaraha-maso sy rindranasa na rafitra fanaraha-maso ho an'ny famokarana rongony manokana;
Simia fanadihadiana sy fitsapana ny rongony;
Fomba fitantanana rano;
Fomba fanalefahana fofona;
Fitanana an-tsoratra an-tsoratra sy eo an-toerana;
Ny fifehezana ny bibikely sy ny fomba fitantanana aretina, ao anatin'izany ny drafitra amin'ny fampiasana fanafody famonoana bibikely, otrikaina ary additives;
Drafitra fanariana fako; SY
Fanarahana ny lalàna sy ny lalàna mifehy.
Ankoatr'izay, ny mason-tsivana hovolavolain'ny CRC dia tsy maintsy ampidirina amin'ireto manaraka ireto:
Ny drafitry ny fiantraikan'ny tontolo iainana an'ny mpangataka.
Famintinana ny drafitra momba ny fiarovana sy ny fiarovana ny mpangataka, izay misy ny famaritana ireto manaraka ireto:
Drafitra hampiasana mpitandro ny filaminana, ao anatin'izany ny mpifanaraka;
Ny traikefa na ny fahaiza-manaon'ny mpiambina sy ny mpifanaraka tolo-kevitra;
Ny endrika fiarovana sy fanaraha-maso, ao anatin'izany ny filazalazana ny rafi-panairana rehetra, ny rafitra fanaraha-maso horonantsary, ny rafitra fidirana sy ny fitantanana mpitsidika, miaraka amin'ny sary mamantatra ireo toerana natolotra ho an'ny fakantsary fanaraha-maso sy ireo endri-piarovana hafa;
Drafitra fitehirizana koba rongony sy rongony, ao anatin'izany ny trano fitehirizana, trano firaketana ary rafitra fanaraha-maso ny toetrandro izay ampiasaina amin'ity tanjona ity;
Drafitra fisorohana fialofana;
Drafitra fitantanana vonjy maika;
Fomba fizahana, fanaraha-maso ary fanatanterahana ny fanaraha-maso ny tantaran'ny heloka bevava ataon'ny mpiasa;
Fomba fanao amin'ny cyber;
Drafitra fiarovana ny toeram-piasana sy ny fahalalan'ny mpangataka amin'ny lalàna mifehy ny fiarovana sy ny fahasalamana momba ny asa;
Tantaran'ny mpangataka momba ny fitakiana onitra sy ny tombana amin'ny fiarovana ny mpiasa;
Fombafomba fitaterana tranga ratsy; SY
Drafitra fanaovana fidiovana.
Famintinana ny zavatra niainan'ny mpangataka, anisan'izany ireto raha azo atao:
Ny traikefan'ny mpangataka amin'ny asa aman-draharaha miasa amin'ny indostria voafehy be;
Ny traikefan'ny mpangataka amin'ny fampandehanana orinasa rongony na ivon-toeram-pitsaboana hafa ary famokarana rongony, famokarana, fivarotana entana, na orinasa mpivarotra, na traikefa amin'ny fizarana rongony na serivisy fanaterana, araka ny lalàn'i New Jersey na fanjakana na fahefana hafa ao Etazonia. ; SY
Ny drafitry ny mpangataka mba hanaraka sy hanalefaka ny vokan'ny 26 USC s.280E amin'ny orinasa rongony, ary ho porofo fa ny mpihetsiketsika dia tsy tratry ny trosa arak'asa amin'ny hetra takiana amin'ny Fanjakana.
Famaritana ny toerana natolotra ho an'ny tranonkalan'ny mpangataka, anisan'izany ireto manaraka ireto raha ilaina:
Ny toerana natolotra, ny faritra manodidina, ary ny mety na ny tombony azo avy amin'ilay toerana natolotra, miaraka amin'ny drafitra gorodona sy ny fandikana tsy voatery na ny drafitra arafitrano na injeniera;
Ny fandefasana ny fankatoavana ny fizaran-tany ho an'ny toerana naroso, izay misy taratasy na fanekena avy amin'ny tompon'andraikitra tompon'andraikitra ao amin'ny tanàna fa ny toerana dia hifanaraka amin'ny fepetra apetraky ny faritra eo an-toerana mamela ny hetsika mifandraika amin'ny asan'ilay mpamboly rongony naroso, toy izay hotanterahina amin'ny toerana natolotra; SY
Ny fandefasana ny porofom-panohanana eo an-toerana amin'ny fahamendrehana ny toerana, izay azo aseho amin'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filan-kevi-pitantanana ny tanàna izay manondro fa ny toerana nokasaina dia mety na mety amin'ny hetsika mifandraika amin'ny asan'ilay mpamboly rongony.
Ny fiatraikany eo amin'ny fiaraha-monina, ny andraikitra ara-tsosialy ary ny fanambarana momba ny fikarohana, izay mety misy, fa tsy ferana, ireto manaraka ireto:
Drafitra misy fiatraikany eo amin'ny fiarahamonina mamintina ny tanjon'ny mpangataka mba hisy fiatraikany tsara amin'ny fiarahamonina izay hametrahana ny fananganana rongony, mpaninjara, na serivisy fanaterana, izay misy drafitra misy fiantraikany ara-toekarena sy famaritana ireo asa fitoriana.
Famaritana an-tsoratra momba ny firaketana ny andraikitra ara-tsosialy, ny fanampiana ara-tsosialy ary ny fifamatorana amin'ny vondrom-piarahamonina natolotray;
Famaritana an-tsoratra momba ny fikarohana nataon'ny mpangataka momba ny voka-dratsin'ny fampiasana zava-mahadomelina, fanararaotana zava-mahadomelina na fiankinan-doha, ary ny fandraisan'anjaran'ny mpangataka amin'ny fikarohana na hetsika fanabeazana mifandraika amin'ny rongony; SY
Drafitra voasoratra mamaritra ny fikarohana sy ny fampandrosoana mikasika ny voka-dratsin'ny rongony, ary ny hetsika fanabeazana sy ny asa fitoriana mifandraika amin'ny rongony, izay kasain'ny mpangataka hotanterahina raha toa ka manome fahazoan-dàlana avy amin'ny vaomiera.
Drafitra famolavolana mpiasa sy famoronana asa, izay mety misy ny mombamomba ny tantaran'ny famoronana asa sy ny famoronana asa kasaina hatao eo am-pananganana, mpizara, na serivisy fanaterana rongony; fanabeazana, fanofanana ary loharano azo omena ho an'ny mpiasa; misy fanamarinana mifandraika amin'izany; ary drafitra fahasamihafana tsy voatery.
Drafitra fandraharahana sy ara-bola, izay mety misy, fa tsy ferana, ireto manaraka ireto:
Famintinana mpanatanteraka ny drafi-pandraharahan'ny mpangataka;
Fampisehoana ny fahaiza-manaon'ny mpangataka amin'ny fampiharana ny drafi-pandraharahany, izay mety misy, fa tsy ferana amin'ny, fanambaram-bolan'ny banky, fanambarana ara-bola momba ny raharaham-barotra sy ny isam-batan'olona, ​​fanambaram-bola, ary ny trosa momba ny fampindramambola sy trosa; SY
Famaritana ny drafitry ny mpangataka hanaraka torolàlana mifandraika amin'ny rongony navoakan'ny tambajotram-pitohizan'ny heloka bevava ara-bola eo ambanin'ny 31 USC s.5311 et seq. avy amin'ny banky na sendika mpampindram-bola izay manamarina fa fantatr'izy ireo ny asan'ny mpangataka, na orinasa manana fananana na fanaraha-maso iraisana amin'ny mpangataka, amin'ny fanjakana rehetra izay ampiasain'ny mpangataka orinasa mifandraika amin'ny fampiasana azy manokana na rongony rongony.
Na ny ankamaroan'ny mpangataka na ny tompona mifehy dia nankatoavin'ny komisiona taloha ho toy ny manamboninahitra, talen'ny, talen-tsekoly, na mpiasan'ny foibe fitsaboana hafa na fananganana rongony manokana, mpaninjara, serivisy fanaterana 17 na fanompoana natolotry ny olona toy izany mandritra io enina io na enim-bolana
Ny fampahalalana hafa rehetra heverin'ny vaomiera fa ilaina amin'ny famaritana raha hanome fahazoan-dàlana ho an'ny mpangataka.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny fizotry ny fahazoan-dàlana ianao dia atolotra anao izany mifanerasera amina manam-pahaizana eny an-tsaha mba hahazoanao ny fitarihana ilaina amin'ny ezaka ataonao.
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HANOKAFANA NY DISPENSARY AO JERIA Vaovao
FIVAVAHANA MISY: JERSEY Vaovao TSY MAFANA NY LICENSE MICROBUSINESS
Momba ny canopies mitombo ho an'ireo manana fahazoan-dàlana amin'ny fambolena New Jersey
Araka ny lalàna farany momba an'io raharaha io, ny komisiona dia tokony handray fitsipika na lalàna mametra ny haben'ny vatan'ny zavamaniry rongony matotra any amin'ny toerana anafahana fahazoan-dàlana ho an'ny mpanafatra rongony. Amin'io lafiny io, rehefa mandray fitsipika sy fitsipika ny CRC dia tokony handinika raha:
Fepetra ny haben'ny zavamaniry rongony matotra maniry ny toeram-ponenana any an-trano, ary any an-trano no itomboana ny rongony, amin'ny fomba fikajiana ny vokatra izay miteraka haben'ny ravina rongony voaangona ary voninkazo rongony voajinja, na inona na inona rongony dia maniry any ivelany na ao an-trano; na
Mampiasà rafitra misy ambaratonga ahazoana haben'ny zavamaniry mpamboly rongony matotra maniry hitombo na hihena amin'ny fotoana fanavaozana ny fahazoan-dàlana mifanaraka amin'izany rafitra misy ambaratonga izany, afa-tsy ny haben'ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpamboly rongony matavy maniry hitombo dia tsy afaka miakatra aorian'ny taona iray izay nanafaran'ny komisiona ny mpamboly rongony noho ny fanitsakitsahana ny fepetra, lalàna na lalàna nomen'ny mpanao lalàna; na
Diniho ny fangatahan'ny tsena ny zava-mahadomelina ao amin'ity Fanjakana ity, ny isan'ny olona mangataka fahazoan-dàlana ary nomena fahazoan-dàlana mifanaraka amin'ireto fizarana ireto, ary raha toa ka mifanaraka amin'ny fangatahan'ny tsena ny fisian'ny entana rongony ao amin'ity Fanjakana ity. .
Fameperana fahazoan-dàlana amin'ny fambolena New Jersey
Amin'izao fotoana izao, ny totalin'ny lisansa izay ho hita ao New Jersey dia mbola tsy voafaritra. Na izany aza, ny lalàna ankehitriny dia mametra ny fahazoan-dàlana mamboly New Jersey hatramin'ny 37 mandritra ny 24 volana voalohany, izay misy ivon-toerana fitsaboana hafa heverina fa azo ekena amin'ny fahazoan-dàlana New Jersey Cultivation. Saingy, io famerana io dia tsy mihatra amin'ny fahazoan-dàlana mamboly rongony navoaka amin'ny orinasa bitika
Further, for a period of XNUMX months after the effective date of the legislation it is unlawful for any owner, part owner, stockholder, officer, or director of any corporation, or any other person engaged in any retailing of any cannabis items to engage in the growing of, testing of manufacturing of, wholesaling of, or transporting in bulk any cannabis items, or to own either whole or in part, or to be a shareholder, officer or director of a corporation or association, directly or indirectly, interested in any cannabis cultivator.
Midika izany fa, raha manana dispensary rongony any New Jersey ianao dia tsy afaka hanana fahalianana mifehy amin'ny asa fambolena rongony.
Farany, farafahakeliny 10 isan-jaton'ny totalin'ny fahazoan-dàlana sy ny fahazoan-dàlana fepetra no tendrena ary omena an'ireo orinasa bitika ihany. Aorian'ny vanim-potoana voalohany aorinan'ny isan'ny fahazoan-dàlana, ny komisiona dia handinika ny isan'ny fahazoan-dàlana navoaka ankehitriny, ary omena misy ny mpangataka mahafeno fepetra, ny komisiona dia manome lisansa ampy ampy hamaliana ny fitakian'ny tsenan'ny State of New Jersey.
FIVAVAHANA MISY: NY fanaterana CANNABIS NEW YORK
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana marijuana any Massachusetts
by Tom | Enga anie 27, 2021 | Lisansa fandraharahana marijuana Massachusetts
FOMBA HAHAZOANA LISENY BUSINESS BUSINESS MARIJUANA AO AMIN'NY MASSACHUSETTS Raha te hahafantatra ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana rongony any Massachusetts ianao, dia tokony ho fantatrao ny lalàna sy lalàna mifehy ny rongony fampiasan'ny olon-dehibe na fampiasana fitsaboana any amin'ny fanjakana. Nohamafisin'i Massachusetts ...